FAKAFAKA: hitondra inona iny andro iny ? | NewsMada
21 febroary, Andro iraisam-pirenena ho an’ny Tenindreny. Isan-taona, ankalazaina maneran-tany izy io. Ho an’i Madagasikara, nahitana hetsika vitsivitsy nanerana ny Nosy. Tao ny efa mahazatra fa nisy koa ny zava-baovao. Fa ny ho tohiny hanao ahoana ? Tsy ny ho tohin’ny fankalazana fa ny akony. Hitondra inona ho an’ny teny malagasy iny andro iny ? Ireo nikarakara hetsika milaza fa tsy ho rano natondraka ny lamosin-gana akory ny ezaka nataon-dry zareo. Ireo mpitazam-potsiny, tsy nety namaly ny fanontaniana, na niteny ihany ka nilaza fa : « tokony, tokony, tokony… » !
Tenin-dreny (tenindreny), teny ibeazana, izay ilazana azy, angamba, tsy maninona fa ny zava-dehibe, tia ny teniny ny Malagasy. Mampiasa ny teniny ny Malagasy. Mikajy sy manolokolo ary manao izay tsy hahafaty ny teniny ny Malagasy. Raha ireo no ikelezana aina ny fomba hanatanterahana azy, azo antoka fa ho « 21 febroary » hatrany ny andro rehetra ho an’ny teny malagasy.
Tsy ho voatanisa amin’ny antsipiriany ireo fomba atao hahatrarana ny tanjona fa ireo heverina fa zava-dehibe no mila aroso. Goavana indrindra ny tontolon’ny fanabeazana sy ny fampianarana. Tsy ny any an-tsekoly ihany fa ny any an-tokantrano, ny any amin’ny toeram-piasana, ny any anivon’ny fikambanana isan-karazany, eny amin’ny fiarahamonina, sns. Mila tezaina sy beazina amin’ny teniny ny Malagasy, satria izay no voajanahary aminy.
Tsy sarotra ny manatanteraka izany raha misy ny finiavana. Saingy hatreto, ny hafanam-po no miavosa fa ny zavatra atao « ny omaly tsy miova » ihany. Ilay endrika ivelany no mody amboamboarina fa ny tena votoatin-javatra, ny teo ihany no eo. Taiza no mbola nisy firenena manana ny tenin-drazany kanefa ny taranany ampianarina amin’ny teny vahiny ? Valiny : « ilay firenena faharoa avy any amin’ny farany » !